Xildhibaanada taabacsan Jawaari oo war kasoo saaray caga jiid ay sheegen in lagu hayo xalinta Mooshinka - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada taabacsan Jawaari oo war kasoo saaray caga jiid ay sheegen in...
Xildhibaanada taabacsan Jawaari oo war kasoo saaray caga jiid ay sheegen in lagu hayo xalinta Mooshinka
Muqdisho (Caasimada Online)-Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay shir gaara oo u dhexeeyay qaar kamid ah Xildhibaanada garabka taabacsan Guddoomiye Jawaari ee aadka uga soo horjeeda Mooshinka.
Xildhibaanadan ayaa shirkooda uga hadlaayay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay inaanu weli joogsan Mooshinka laga waday Jawaari.
Xildhibaanada oo aad u badnaa ayaa sheegay in weli ay taagan tahay xiisadii ka dhalatay Mooshinkii laga gudbiyey Jawaari,waxa ayna cod dheer ku sheegen in qorshayaal kale laga damacsan yahay Mooshinka.
Waxa ay Xildhibaanadu sheegen in Madaxtooyada Somalia ay sheeda ka daawaneyso xiisada weli ka taagan Mooshinka laga gudbiyay Jawaari, waxa ayna si gaara farta ugu fiiqeen in Madaxweyne Farmaajo keliya uu hakiyay kulankii qabsoomi lahaa Sabtidii ina dhaaftay, hase ahaatee uusan qaadin talaabo kale oo lagu joojinaayo Mooshinka, sida ay hadalka u dhigeen.
Waxa ay Xidhibaanadu sheegen in rajada la qabay ay aheyd in si toosa loo faragaliyo xiisada ka dhalatay Mooshinka Jawaari, balse aanu muuqan dadaal lagu doonaayo in looga gudbo xiisada.
Xildhibaan Axmed Macalin fiqi oo kamid ahaa Xildhibaanada shirka ka hadlay ayaa sheegay in Shacabka Soomaaliyeed mudo 5 cisho ah wakhtiga laga dhumiyey laakin aan waxba ku soo kordhin.
Fiqi, waxa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo laga doonaayo in si toosa uu u faragaliyo xiisada, waxa uuna cadeeyay inaanu jirin dadaal cad oo lagu faragalinaayo Mooshinka.
Axmed Fiqi waxa uu intaa raaciyay in la doonaayo in lasii wado Mooshinka isla markaana ay dalbanayaan in warka la cadeeyo oo meesha laga saaro waxyaabaha la qarinayo.
Si kastaba ha ahaatee, Xildhibaanadan ayaa ku baaqay in Madaxtooyada Somalia ay si dhaba u faragaliso xiisada ka dhex aloosan Guddoonka baarlamaanka, Xildhibaanada iyo Xukuumada Somalia.